Guddiga Farsamada ee Mamaul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud oo tababar u furmay – Radio Muqdisho
Guddiga Farsamada ee Mamaul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud oo tababar u furmay
Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho tababar uga furtay xubno ka socda guddiga farsamada maamul u samaynta gobolada Dhexe ee dalka.
Tababarkaan oo socon doona muddo shan cisho ah ayaa Mas’uuliyiintii ka hadashay waxa ay bogaadiyeen Guddiga Farsamada maamul u sameynta Gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Cabdifitaax Daahir Mire oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in u jeedka tababarka uu yahay in labaro sida ugu haboon ay u wajihi lahaayeen samaynta maamullo loo dhanyahay.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka Mudane Cali Abtidoon Xalane oo ka hadlay furitaanka tababarkaan ayaa kula dar-daarmay Guddiga in ay sii xoojiyaan dadaal kooda ku aadan dhamaystirka maamulka.
Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dr Ismaaciil Jimcaale ayaa Xusay in Wasaaraddu ay dadaal ugu jirto Hirgelinta Nidaamka federaalka oo Dalka oo dhan uu yeesho ka hor sanadka 2016 ka.
Dadaalada lagu doonayo in Maamul ay u wada dhanyihiin Bulshada degta Gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa bilihii ugu dambeeeyay waxa ay ka socdeen Gudaha Dalka iyo Dibadiisa.
Tartan Isbortis oo lagu soo gebagebeeyay degmada Jalalaqsi